Ọnụ Ọgụgụ 31 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ọnụ Ọgụgụ 31:1-54
31 Jehova wee gwa Mozis, sị:
2 “Bọọrọ ụmụ Izrel ọbọ+ n’ahụ́ ndị Midian.+ E mesịa, ị ga-anwụ dị ka ndị gị nwụrụ.”+
3 Mozis wee gwa ụmụ Izrel, sị: “Kwadebenụ ndị ikom ụfọdụ n’etiti unu ka ha soro ná ndị agha, ka ha wee buso ndị Midian agha iji bọọ ọbọ Jehova n’ahụ́ Midian.+
4 Unu ga-esi n’ebo ọ bụla nke Izrel họpụta otu puku mmadụ ka ha soro ná ndị agha.”
5 E wee si n’etiti puku kwuru puku+ ụmụ Izrel họpụta otu puku mmadụ n’otu ebo, puku mmadụ iri na abụọ a kwadebere ka ha soro ná ndị agha.+
6 Mozis wee zipụ ha, otu puku mmadụ site n’ebo nke ọ bụla, ha na Finihas+ nwa Elieza bụ́ onye nchụàjà, ka ha soro ná ndị agha, o jikwa arịa dị nsọ na opi+ ndị ahụ e ji akpọ òkù.
7 Ha wee buso ndị Midian agha, dị nnọọ ka Jehova nyere Mozis n’iwu, ha wee gbuo nwoke ọ bụla.+
8 Ha gburu ndị eze Midian, ya bụ, Ivaị na Rikem na Zọọ na Họọ na Riba, bụ́ ndị eze Midian ise;+ tinyere ndị ọzọ, ha jikwa mma agha gbuo Belam+ nwa Biọ.
9 Ma ụmụ Izrel dọọrọ ndị inyom Midian na ụmụntakịrị ha n’agha;+ ha chịkọkwaara anụ ụlọ ha niile na anụmanụ ha niile, bukọrọkwa akụ̀ ha niile.
10 Ha gbakwara obodo niile ha bi na ụlọikwuu ha a gbara ogige ọkụ.+
11 Ha wee chịrị ihe niile ha kwatara+ na ihe niile ha dọtara n’agha, ma mmadụ ma anụ ụlọ.
12 Ha wee kpọrọ ndị ahụ ha dọtara n’agha, burukwa ihe ha lụtara na ihe ha kwatara n’agha, bịakwute Mozis na Elieza onye nchụàjà nakwa nzukọ ụmụ Izrel, n’ebe ha mara ụlọikwuu, na mbara ọzara Moab+ nke dị n’akụkụ Jọdan, n’ebe dị nso na Jeriko.
13 Mozis na Elieza onye nchụàjà na ndị isi niile nke nzukọ ahụ wee gaa izute ha ná mpụga ụlọikwuu ahụ.
14 Mozis wee weso ndị a họpụtara n’etiti ndị agha+ ahụ iwe, bụ́ ndị isi otu puku otu puku ndị agha nakwa ndị isi otu narị otu narị ndị agha, bụ́ ndị si agha ahụ na-alọta.
15 Mozis wee sị ha: “Ùnu hapụrụ ụmụ nwaanyị niile ndụ?+
16 Lee! Ọ bụ ha bụ ndị Belam gwara okwu, ha wee raba ụmụ Izrel n’imeso Jehova omume ekwesịghị ntụkwasị obi+ n’ihe ahụ mere na Piọ,+ ihe otiti wee dakwasị nzukọ Jehova.+
17 Ugbu a, gbuonụ nwoke ọ bụla n’ime ụmụntakịrị ha, gbuokwanụ nwaanyị ọ bụla ya na nwoke dinaworo wee nwee mmekọahụ.+
18 Hapụrụnụ onwe unu ụmụntakịrị n’ime ụmụ nwaanyị ha ndụ, bụ́ ndị na-amaghị ihe bụ́ iso nwoke dinaa.+
19 Ma unu onwe unu, maanụ ụlọikwuu ná mpụga ụlọikwuu anyị ruo ụbọchị asaa. Onye ọ bụla nke gburu mkpụrụ obi+ na onye ọ bụla nke metụrụ onye e gburu egbu aka,+ unu ga-eme onwe unu ka unu dị ọcha+ n’ụbọchị nke atọ nakwa n’ụbọchị nke asaa, ma unu ma ndị unu dọọrọ n’agha.
20 Unu ga-asachapụ uwe mwụda niile mmehie,+ tinyere ihe ọ bụla e ji akpụkpọ anụ mee na ihe ọ bụla e ji ajị ewu mee na ihe ọ bụla e ji osisi mee.”
21 Elieza onye nchụàjà wee gwa ndị agha ahụ gara agha, sị: “Nke a bụ ụkpụrụ nke iwu Jehova nyere Mozis,
22 ‘Ọ bụ naanị ọlaedo na ọlaọcha, ọla kọpa, ígwè, gbamgbam na opu,
23 ihe ọ bụla a na-eji ọkụ anụcha+ ka unu ga-etinye n’ọkụ, ọ ga-adịkwa ọcha. Ma a ga-eji mmiri e ji eme ka ihe dị ọcha mee ka ọ dị ọcha.+ Unu ga-eji mmiri sachaa+ ihe ọ bụla a na-ejighị ọkụ anụcha.
24 Unu ga-asakwa uwe mwụda unu n’ụbọchị nke asaa wee dị ọcha, e mesịa, unu ga-abata n’ebe unu mara ụlọikwuu.’”+
26 “Gị na Elieza onye nchụàjà na ndị isi nke ndị bụ́ nna ná nzukọ a gụọ ihe ha kwatara n’agha ọnụ, tinyere ndị ha dọtara n’agha na anụ ụlọ ha chị lọta.
27 Kee ihe ha kwatara n’agha ụzọ abụọ, were otu ụzọ nye ndị na-eso aga agha, bụ́ ndị gara agha ahụ, werekwa nke ọzọ nye ndị niile fọdụrụ ná nzukọ a.+
28 Nata ndị agha ahụ, bụ́ ndị gara agha ahụ, otu mkpụrụ obi n’ime narị mkpụrụ obi ise ọ bụla n’etiti ndị mmadụ na ehi na ịnyịnya ibu na ewu na atụrụ, ka ha bụrụ ụtụ+ a ga-atụrụ Jehova.
29 Unu ga-esi n’ọkara nke ha weta ya nye Elieza onye nchụàjà ka ọ bụrụ onyinye e nyere Jehova.+
30 Ị ga-esikwa n’ọkara e nyere ụmụ Izrel were otu mmadụ n’ime mmadụ iri ise ọ bụla na otu ehi n’ime ehi iri ise ọ bụla na otu ịnyịnya ibu n’ime ịnyịnya ibu iri ise ọ bụla na otu ewu ma ọ bụ atụrụ n’ime ewu na atụrụ iri ise ọ bụla, n’ime ụdị anụ ụlọ ọ bụla, ị ga-ewerekwa ha nye ndị Livaị,+ bụ́ ndị na-arụ ọrụ ha kwesịrị ịrụ n’ụlọikwuu Jehova.”+
31 Mozis na Elieza onye nchụàjà wee mee dị ka Jehova nyere Mozis n’iwu.
32 Ihe ha kwatara n’agha, bụ́ ihe fọdụrụ n’ime ihe ndị ahụ gara agha kwatara n’agha, bụ atụrụ dị narị puku isii na iri puku asaa na ise,
33 na puku ehi iri asaa na abụọ,
34 na puku ịnyịnya ibu iri isii na otu.
35 A bịa ná mkpụrụ obi bụ́ mmadụ,+ malite n’ụmụ nwaanyị ndị na-amaghị ihe bụ́ iso nwoke dinaa,+ mkpụrụ obi niile ahụ dị puku iri atọ na abụọ.
36 Ọkara nke ọzọ e kenyere ndị ahụ gara agha bụ ewu na atụrụ dị narị puku atọ na iri puku atọ na asaa na narị ise.
37 Ụtụ+ a tụụrụ Jehova n’ime ewu na atụrụ ahụ dị narị isii na iri asaa na ise.
38 Ehi dị puku iri atọ na isii, ụtụ e si n’ime ha tụọrọ Jehova dị iri asaa na abụọ.
39 Ịnyịnya ibu dị puku iri atọ na narị ise, ụtụ e si n’ime ha tụọrọ Jehova dị iri isii na otu.
40 Mkpụrụ obi bụ́ mmadụ dị puku iri na isii, ụtụ e si n’ime ha tụọrọ Jehova dị mkpụrụ obi iri atọ na abụọ.
41 Mozis wee nye Elieza onye nchụàjà ụtụ ahụ ka ọ bụrụ onyinye e nyere Jehova,+ dị ka Jehova nyere Mozis n’iwu.+
42 Site n’ọkara ahụ e kenyere ụmụ Izrel, bụ́ nke Mozis si n’ihe ahụ ndị gara agha kwatara kewapụta—
43 ọkara ahụ e kenyere nzukọ ahụ bụ ewu na atụrụ ndị dị narị puku atọ na iri puku atọ na asaa na narị ise,
44 ehi dị puku iri atọ na isii,
45 ịnyịnya ibu dị puku iri atọ na narị ise,
46 mkpụrụ obi bụ́ mmadụ dị puku iri na isii—
47 ee, site n’ọkara ahụ e kenyere ụmụ Izrel, Mozis wepụtara otu mmadụ n’ime mmadụ iri ise ọ bụla, otu anụ ụlọ n’ime anụ ụlọ iri ise ọ bụla, bụ́ ndị o kwesịrị iwepụta, ma were ha nye ndị Livaị,+ bụ́ ndị na-arụ ọrụ ha kwesịrị ịrụ+ n’ụlọikwuu Jehova, dị nnọọ ka Jehova nyere Mozis n’iwu.
48 Ndị ahụ a họpụtara n’ime puku kwuru puku ndị agha,+ bụ́ ndị isi otu puku otu puku ndị agha na ndị isi otu narị otu narị ndị agha,+ wee bịakwute Mozis,
49 wee sị Mozis: “Ndị ohu gị agụwo ndị agha anyị na-achị ọnụ, ọ dịghị onye e kwuru na a na-achọ achọ.+
50 Ya mere, ka onye ọ bụla n’ime anyị weta ihe o ji bịa ka ọ bụrụ onyinye a ga-enye Jehova,+ ya bụ, ihe e ji ọlaedo mee, ọla ụkwụ, ọla aka, mgbaaka e ji aka ihe akara,+ ọla ntị, ihe ndị inyom ji achọ mma,+ ka e jiri ha kpuchiere mkpụrụ obi anyị mmehie n’ihu Jehova.”
51 Mozis na Elieza onye nchụàjà wee nara ha ọlaedo ndị ahụ,+ ọla ịchọ mma niile ahụ.
52 Ọlaedo niile ha nyere Jehova, nke ndị isi otu puku otu puku ndị agha na ndị isi otu narị otu narị ndị agha nyere, dị puku shekel iri na isii, narị asaa na iri ise.
53 Onye ọ bụla n’ime ndị agha ahụ ketara ihe n’ihe ha kwatara.+
54 Mozis na Elieza onye nchụàjà wee nara ndị isi otu puku otu puku ndị agha na ndị isi otu narị otu narị ndị agha ọlaedo ndị ahụ ma webata ha n’ụlọikwuu nzute ka ọ bụụrụ ụmụ Izrel ihe ncheta+ n’ihu Jehova.
Ọnụ Ọgụgụ 31